Pnpkhabar.com | Nepali Online News, Videos & Entertainment यस्ता छन्, फास्टफुडमा स्वाद बढाउन प्रयोग गरिने टेस्टीङ पाउडरको बेफाइदा ! - Pnpkhabar.com
यस्ता छन्, फास्टफुडमा स्वाद बढाउन प्रयोग गरिने टेस्टीङ पाउडरको बेफाइदा !
एजेन्सी : आजकाल अधिकांश मानिसहरु फास्टफुडको सौखिन छन् । रेष्टुरेन्ट गएर स्वादिलो फास्टफुड खानु मानिसहरुको बानी नै भैसकेको छ । तर के तपाईंलाई थाहा छ, यसो गर्दा तपाईंहरु जानी नजानी मोनो सोडियम ग्लुटामेटको भरपूर सेवन गरिरहनुभएको छ । सायद अधिकांश मानिसलाई मोनो सोडियम ग्लुटामेट अर्थात् एमएसजीको हानीबारे थाहा छैन । प्याकेटमा एमएसजी छैन भनेर लेखेपनि .उद्योगहरुल चलाखीपूर्वक यसको प्रयोग गरिरहेका हुन्छन् ।
१, एमएसजीको प्रकृति नशालु पदार्थजस्तै हुन्छ । एकबार एमएसजीयुक्त खाद्यपदार्थ खाएपछि मानिसमा पटकपटक त्यही खानेकुरा खाने लत बस्छ ।
२, यसको सेवनले शरीरमा इन्सुलिनको मात्रा प्रभावित हुन्छ र टाइप टु डाइबिटिजको खतरा बढाउँछ ।
३, आँखाको शक्तिमा प्रभाव पर्छ,रेटिनामा नोक्सान पु¥याउन सक्छ । मुटुको धड्कन बढ्नुका साथै मुटुसम्बन्धी रोग लाग्ने सम्भावना बढ्छ । यसका अलावा
छातिमा पीडा हुने समस्या पनि आउन सक्छ ।
४, शरीरमा कोषिकाहरुमा प्रभाव पार्छ, यसको लगातार सेवनले दिमागको क्षमतामा असर पर्छ, अल्जाइमर्स, पाकिन्सन्सजस्ता समस्या निम्तन सक्छ ।
५, बाँझोपन निम्तन सक्छ । यसको प्रयोगबाट गर्भमा हुर्किरहेको बच्चालाई खाना पुर्याउने नली प्रभावित हुन्छ र भ्रुणको विकास हुन पाउँदैन ।
६, लगातार एमएसजीयुक्त खाना खानाले रक्तचाप बढ्छ र मुटु रोग निम्तन सक्छ ।
७, माइग्रेन या टाउको दुख्ने समस्या हुन सक्छ ।